Iindaba - yintoni umahluko wokuthwala itywina kunye nesigqubuthelo sethuli lensimbi?
yintoni umahluko wokuthwala itywina kunye nesigqubuthelo sethuli yentsimbi?
Umahluko wokuthwala itywina kunye nentsimbi ikepusi
-Ukufaka isangqa sokutywina kukusebenza kwayo ngokutywina kwaye ubomi benkonzo bunokubaluleka okubalulekileyo.
Ukuthwala ukogquma uthuli kukuthintela ukuthwala uthuli kunye nokunye ukungqubana okuchaphazela umsebenzi.
Izinto ezahlukeneyo zahlukile,
Isangqa sokutywina senziwe ngerabha. Izinto zokuthwala isiciko esingenakuthuli licwecwe lesinyithi lesinyithi.
Isigqubuthelo sothuli yindlu e-annular, ihlala isitampu kwiphepha elincinci lesinyithi, eliqhotyoshelwe kwindandatho enye okanye i-Washer ye-bearing kwaye idlulela kwenye iringi okanye i-Washer, ifihla indawo yangaphakathi yokuthwala ngaphandle kokunxibelelana nenye iringi okanye Isicoci.
Omnye unobungqina bokuba uthuli, kwaye omnye awunomoya. Uthintelo lothuli kukuthintela uthuli ngaphakathi kwimoto; Ukutywinwa kungekuphela nje uthuli lwangaphandle alunakungena kwaye igrisi yangaphakathi akukho lula ukuphuma. Igrisi engacocekanga ngaphandle akukho lula ukungena kuyo.
Ukuziqhelanisa umahluko phakathi kwezi zimbini awukho mkhulu kakhulu. Iibheringi ngokubanzi ngaphakathi nangaphandle kwekepusi yeoyile, idlale le ndima, kuphela kwiimeko ezithile ezifunekayo kuphela. I-Z yokungabi nothuli kunye ne-S yokutywina (i-FS yokuziva itywina yeringi kunye ne-LS yerabha).